Tutorial ee Kingmax Memory Card Recovery
Ma u baahan tahay Kingmax Memory Card Data Recovery Kaalmadaada !!
3 Talaabada dib u soo ceshano Xogta laga Kingmax Memory Card
1 Need Kingmax Memory Card Data Recovery Kaalmadaada !!
Aan qabo dhibaato la kaadhka xusuusta Kingmax 1GB. Computer ayaa waxa ay muujiyeen sida disk laga saari laakiin markii aan isku dayay in aan u furo, farriin ii sheegay in kaarka loo baahan yahay in la formatted. Sidaas daraaddeed waxaan u formatted. Laakiin ugu dhakhsaha badan laga dareemayaa maxaa yeelay, dhammaan photos dadkaygii waxaa loo. Waxaan ku dhowaad oohin. Fadlan ii caawin! Runtii waxaan photos aan u baahan tahay dib !!!
Maalmahan, kaararka xusuusta hubkaas ayaa loo isticmaalaa telefoonada smart, kaamirooyinka digital iyo aaladaha kale ee digital. Mid ka mid ah arrinta ugu weyn ee ah in laga yaabo inay dhacaan in kaadhka xusuusta waa khasaaraha xogta. Xogta kaadhka xusuusta laga yaabaa in lagu waayay tirtirka shil ah, musuqmaasuqa card, formatting ama xataa jeermiska fayraska. Sidaas darteed, si aad u hesho dib u xog qiimo leh, waxaad u baahan tahay caawimo ka soo xusuusta Kingmax software kabashada card.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa utility ah in awood aad dib u soo ceshano lumay, tirtiray, formatted ama faylasha laga kaadhka xusuusta Kingmax, oo ay ku jiraan card SD, kaarka SDHC iyo kaarka MMC. Geli kaadhka xusuusta aad kuu computer iyo isticmaali Wondershare Data Recovery si ay u iskaan, oo markaas aad si fudud u soo ceshano karo files music, videos, sawiro, document files, iwm ka kaadhka xusuusta Kingmax.
Download version Wondershare Data Recovery maxkamad inuu ka soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta Kingmax hadda!
2 3 Talaabada dib u soo ceshano Xogta laga Kingmax Memory Card
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow Kingmax Memory Card Data Recovery
Connect aad kaadhka xusuusta Kingmax la your computer iyo bandhigista Wondershare Data Recovery. 3 hababka soo kabashada waxaa lagu siin doonaa in interface bilowga: "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "Recovery File ceeriin ah".
Si aad u soo ceshano tirtiray ama kharribeen files ka kaadhka xusuusta Kingmax, waxaad marka hore dooran kartaa "File lumay Recovery" mode.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa tilmaamaha si taxadar leh in interface iyo dooran hab kabashada in uu yahay ugu haboon ee aad u ah.
Tallaabada 2 baarista Kingmax Memory Card
Markaas barnaamijka waxay ku saabsan tahay in baarista kaadhka xusuusta Kingmax. Sidaas oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive aad kaadhka xusuusta Kingmax oo guji "Start Scan" si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad kaadhka xusuusta Kingmax la tusay karaa sida disk adag on your computer iyo suuqa kala barnaamijka.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga Kingmax Memory Card
Your files lumay oo dhan lagu soo bandhigi doonaa qaybaha dhanka bidix ee suuqa kala barnaamijka sawirka kadib. Waxaad ka arki kartaa magacyada file si aad u hubiso in faylka aad doonaysid in aad dib u soo ceshano ayaa laga helay ama aan.
Haddii ay la soo ogaado, waxaad iyaga dooran kartaa oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo. Fadlan ha badbaadiyo files kuwaas oo dib si aad kaadhka xusuusta Kingmax inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.